Updated: 2016-09-06 14:32
ဆာကူရာ(ချယ်ရီ) တို့ နဲ့ အတူ နာမည်ကျော်ကြားသော ပန်းခြံတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုပန်းခြံအတွင်းတွင် ရှိသော (ခခုရင်း တဲဇရပ်) ကြီး ကတော့၊ ယခင်က ဆာဂ ဆယ်ဆက်မြောက် ဗိုလ်ချုပ် ရဲ့ ရေနွေးကြမ်းသုံးဆောင်ရာ နေရာအြ...
Updated: 2016-09-06 13:59
မိဖုနဲရာမ ရာ့ခုအဲန်း ( မိဖုနဲတောင်က နိဗ္ဗာန်ဘုံ )
မိဖုနဲရာမ တောင် ဟာ တခဲအို မြို့ ရဲ့ အမြင့် ၂၁၀ မှာ တည်ရှိတဲ့ တောင်တစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်း မိဖုနဲတောင်က နိဗ္ဗာန်ဘုံ ကတော့ မိဖုနဲတောင်ရဲ့ အနောက်ဖက်ပိုင်း ထိ ၁၅ သောင်း မီတာစကွဲ ကျယ်ပြန့်...
Updated: 2016-08-08 15:33
ယုကရိ ပန်းခြံ ( အမှတ် ၂ လေ့လာရေးမျှော်စင်)
ဆယ်တိုးနိုင်း ခိုင်း ကိုခု အမျိုးသား ပန်း ခြံ ရဲ့ အနောက်ဖက် မှာ ၊ ငှက် ကြည့် နဲ့ ပန်း အလှ ကြည့် တို့ နဲ့ အတူ နာမည် ကြီး သော ပန်း ခြံ ပဲဖြစ်ပါ တယ်။ ...
Updated: 2016-07-11 14:57
Ritsurin Park　ရိစွတ်ရင်း ပန်းခြံ ( ခဂါ့ဝါ ၊ ဂျပန်)
ဂျပန်နိုင်ငံ ရဲ့ ကျက်သရေဆောင် စာ ရင်းမှာတောင် ကဗည်း ထိုးထား ခြင်းခံ ရတဲ့ ပန်း ခြံ တစ်ခု ဖြစ် ပြီး ၊ကျယ်ဝန်းလှတဲ့ ပန်းခြံကြီး ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရိစွတ်လင်း ပန်း ခြံ ကြီး ကို အယ်ဒို ခောတ် စာနုခိ တာက...
Updated: 2016-07-11 14:14
ရာမရှီတ ပန်းခြံ ( ယိုကိုဟာမ ၊ ဂျပန် )
ရာမရှီတ ပန်းခြံ ကနေ မြင်တွေ့ရမယ့် ရှု ခင်း တွေ ကိုပြော ရရင် ၊ ယိုကိုဟာမ ဘေး တံတားကြီး ၊ ဆိပ် ကမ်း မှာ ဟိုဟိုဒီဒီ ကူးလူးနေတဲ့ သင်္ဘောကြီးတွေ ၊ နဲ့ ကမ်းခြေဆိပ်ကမ်း ရဲ့ နေ၀င် နေထွက် အလှ တို့ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခ...